Carpool Karaoke episode pamwe neLinkin Park may not air | Ndinobva mac
Carpool Karaoke episode pamwe neLinkin Park inogona kusaburitsa mhepo
Mavhiki mashoma apfuura muimbi Linkin Park, Chester Bennington, akawanikwa akafa uye zvese zvinoratidza kuti kwaive kuzviuraya. Kubva ini ndiri kuMac tinokuzivisa izvozvo iri boka rakanga ranyora episode yeiyo nyowani Apple TV show Carpool Karaoke, chirongwa icho Apple yakatotumira chikamu chekutanga sekukuzivisa kwatakaita nezuro.
Ichi chirongwa chitsva haina kusangana nemhinduro dzakanaka neruzhinjiIni pachangu handina kuwana nguva yekuzviona, asi zvinoita sekunge vakomana vemuCupertino havasati vawana kiyi inovabvumira kuti vagadzire zvirimo zvepakutanga zvinobudirira nevezvenhau pamwe neruzhinji, izvo zvinoguma nenhamba huru subscribers.
Kunakidzwa zuva ne @kenjeong @CarpoolKaraoke @AppleMusic - ramba wakashama. pic.twitter.com/v8tSBG1cwF
- LINKIN PARK (@linkinpark) July 14, 2017
Sekureva kwemumwe wevagadziri veCarpool Karaoke, episode iyo Linkin Park inoonekwa iyoyo yakanyorwa mazuva matanhatu kufa kwake kusingaende. Mugadziri anga aine kufunga kwekusiira iyi sarudzo mumaoko emhuri yemuimbi neshamwari.
Ichi chiitiko, icho chakarongerwa kuratidzwa muna Gumiguru, chakatiratidza iyo bhendi ichiimba yavo hombe hanzi pamwe chete nemutambi Ken Jeong (inozivikanwa kubva kuCommunity series). Kufanana nevamwe vevaverengi vedu, saRaúl, vazhinji vedu vateveri veboka iri uye tinoda kunakidzwa neiyi yekupedzisira bvunzurudzo / chirongwa umo mune zvinosiririsa mushakabvu muimbi anoonekwa. Asi ini ndinofunga rufu rwake rwuchiri rwazvino kwazvo rweApple kuti ade kutora mukana wekukweva kunogona kuitika pachiitiko ichi.
Linkin Park yakaumbwa muna 1996, zvingangoita kuti vazhinji venyu munoziva zita rebhendi iri nekuti yaive chikamu chekurira kwemufirimu Shanduko: Kutsiva kwevakawira, ichiratidza chikamu chayo chezvekutengesa ichienzaniswa nemabasa avo apfuura, uye Linkin Park yakagara ichionekwa seimwe dombo bhendi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Carpool Karaoke episode pamwe neLinkin Park inogona kusaburitsa mhepo
STANDBY mutambo unotanga pane Mac App Store
Mapeji ekurodha pasi emahara mabhuku